देश « epurwa
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रसहित मातहत कार्यालयको टोलीले चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा स्टिङ अपरेसन गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउन महिनादेखि कात्तिकसम्म गरेको विभिन्न
राष्ट्रपतिले यसपालि दशैँकाे टीका नलगाइदिने, शक्ति पीठ पनि नजाने
काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस पटकको दशैँमा टीका लगाइदिनु हुने छैन । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण यसपालिको दशैँमा विजया दशमीको दिन राष्ट्रपति भण्डारीले इच्छुकहरुलाई टीका प्रदान नगर्नुहुने भएको हो ।
चाडबाडमा कोरोनाको जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ सचेत रहन गृह मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडाैँ । गृहमन्त्रालयले चाडबाडको समयमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण थप बढ्नसक्ने भएकाले सचेत रहन मातहतका सुरक्षा निकाय तथा प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा तीव्ररूपमा फैलिरहेकाले यसको रोकथाम,
काठमाडौं । कोभिड–१९ विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका ७६ हजार ९६७ नेपाली स्वदेश आएका छन् । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन संञ्चालन केन्द्र९सिसीएमसी० का अनुसार बिहिवारसम्म जहाजमार्फत ३२ मुलुकबाट
सोमबारदेखि पूर्ण क्षमतामा आन्तरिक उडान, ५० प्रतिशत टिकट बुकिङ
काठमाडौँ । कोभिड–१९ महामारीका कारण ६ महिनादेखि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई उडान सोमबारदेखि पूर्ण क्षमतामा हुने भएका छन् । शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर पूर्ण
सिन्धुपाल्चोक पहिरो अपडेट : ३ जनाको शव भेटियो, अझै २४ जना बेपत्ता !
सिन्धुपाल्चाेक । बाह्रबिसे–७ घुम्थाङमा पहिरो जाँदा पुरिएका तीन जनाको शव भेटिएको छ । नागपुजेकी ७० वर्षीया भक्तिमाया श्रेष्ठ तथा विक गाउँका २४ वर्षीया जुनुमाया विक र ४० वर्षीया सर्कीनी प्रधानको शव
गाडी थन्किँदा ४५ लाखको गुजारा संकटमा, असोज १ गतेदेखि चलाउने अनुमति नपाए एकलौटी सञ्चालन गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । लकडाउन तथा निषेधाज्ञासँगै अन्तरजिल्ला चल्ने सार्वजनिक गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउँदा ४५ लाख जनशक्ति संकटमा परेको छ । झन्डै ६ महिनादेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लागेका कारण ११ लाख
३ दिन मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षा हुने सम्भावना, सतर्कता अपनाउन अनुरोध
काठमाडौं । अबको तीन दिन देशका विभिन्न ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित पानी पर्ने सम्भावना रहेकाे छ । महाशाखाले आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गर्दै न्युन चापीय
असोज १ बाट सार्वजनिक यातायात चलाउने व्यवसायीको घोषणा
झापा । आगामी असोज १ गतेदेखि यातायात व्यवसायीहरुले सबै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका नाममा सार्वजनिक यातायात संचालनलाई निषेध गरेका बेला व्यवसायीले यस्तो घोषणा
मुलुकभर ९०२ कोरोना संक्रमित थपिए, कहाँ कति ? (विवरणसहित)
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ९०२ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ४८ हजार १३८ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
© 2020 epurwa